I-TIFF 2021: 'Awunguye uMama wam' Ukondla uloyiko losapho
Ikhaya	bhanyaUPhononongo lweemovie	I-TIFF 2021: 'Awunguye uMama wam' Ukondla uloyiko losapho
by UKelly McNeely Septemba 14, 2021
by UKelly McNeely Septemba 14, 2021 718 imbono
Umbhali / umlawuli weKate Dolan Awunguye uMama wam Kuyothusa ukuthatha isiko eliguqukayo laseIreland, kunye nenqaku lokuqala elinamandla. Yenziwe kuhlahlo-lwabiwo mali oluncinci kwaye iseti umnyhadala weSamhain, yinto entle enomdla evela kwiDolan (enefilimu emfutshane Ukubanjwa iyafumaneka kwiShudder, kwabo banomdla).
Awunguye uMama wam Ulandela uChar (Hazel Doupe), intombazana ethe cwaka ehlala ubomi bodwa. Umama wakhe ongatshatanga u-Angela (Carolyn Bracken) unengxaki yoxinzelelo edla ngokumgcina ebhedini kwaye angakwazi ukwenza imisebenzi yakhe njengomzali. Emva kwentsasa enqabileyo yomsebenzi, uAngela uyalahleka, imoto yakhe isolisa ngokukrokra ishiywe ebaleni. Ukubuya kwakhe, ubonakala… engalunganga. Ukuziphatha kwakhe, ukuma kwakhe, kunye nobuntu bakhe bonke butshintsha ngeendlela ezibonakalayo. Kukho into engaqhelekanga ngomama, kwaye uChar ngokuthe ngcembe ufikelela kwisiphelo esoyikisayo. Ayingomama wakhe lo.
I-Doupe kunye ne-Bracken ine-chemistry entle eguqukayo njengoko ifilimu iqhubeka. Kwiimeko zokuqala, uChar noAngela banodonga olubonakalayo phakathi kwabo olunxibelelana nembali ebuhlungu; UAngela ungcwatyelwe ngasemva komaleko, kwaye uChar kudala wayeka ukuzama ukumgrumba.
Xa uAngela ephinda evela emva kokungabikho kwakhe okungaqondakaliyo, uChar akayazi indlela yokwamkela ingqalelo kanina engalindelekanga. Njengaye nawuphi na umntwana olahliweyo, uyavuya kuba umama wakhe ebonakala ngathi ubuyile kuye-okhoyo ngokweemvakalelo kwaye emhlalisa kuthando oluphose kakhulu kuye. Kodwa kwangaxeshanye, kukho ukuthandabuza ukukholelwa kuyo. I-Doupe iyamangalisa ngokuqikelelwa kwezi mvakalelo zikhuphisanayo. Uphethe umngcipheko ojika woyika ngakumbi njengoko uAngela engaziwa ngokupheleleyo kubuntu bakhe.
I-Bracken iyamangalisa, yenza uluhlu lonke lweemvakalelo ezinamandla ahlukeneyo. Uyaziphosa kwindima- ngokwasemzimbeni nasengqondweni- ngentsebenzo ephantse yalaliswa kubunzulu bayo. Abalingisi bakwabonisa u-Ingrid Craigie njengoRita (umama ka-Angela kunye nogogo kaChar), umgcini-mfihlo wosapho. URita ubambe amandla erusi yiminyaka yokubandezeleka emzimbeni kunye nomthwalo ngokweemvakalelo. Umlingiswa wakhe uziva engasetyenziswanga, kodwa ukulunga, ayilo bali lakhe esijolise kulo.
Awunguye uMama wam Yifilimu eqhubela phambili ababhinqileyo, enabalingisi ikakhulu ababhinqileyo kunye nengxoxo encinci kakhulu yabalinganiswa abangamadoda; asiva ngotata kaChar, kwaye akukho yelenqe lothando lungeyomfuneko, kugxilwe nje kubuhlobo babasetyhini. Omnye wabaxhaphazi bakaChar, uSuzanne (Jordanne Jones), ngokuthe ngcembe ubopha uChar ngaphezulu kwembali yabo efanayo kunye nobomi bosapho obuneengxaki. Akukho mzuzu uSuzanne amthandabuzayo okanye amkhanyele uChar, ungumhlobo nje onyanisekileyo, onovelwano, uChar afuna kakhulu.
Sike sayibona imeko eguqukayo ngaphambili kukothuka (ezinje ngeefilimu ezifanayo zaseIreland IHallow kwaye Umngxunya Emhlabeni), Kodwa kukho into malunga nokwenza umntu okrokrelwayo abe ngumama- kunokuba umntwana okanye elinye iqela lomzimba- oku kusebenza ngakumbi.
UAngela uyatshintsha kuyo yonke ifilimu, esiba sisiphazamiso njengoko ixesha lihamba. UChar uqaphela ezi ndlela zokuziphatha zingaqhelekanga, kodwa kunzima ukuyamkela into yokuba kukho into engalunganga. Ngaphandle kweengxaki zabo, uChar uyamthanda umama wakhe, kwaye nangona isenzo sakhe sinento yokwenza kwaye singoyiki ngokwenene, kunzima nangakumbi ukwenza isigqibo sokuba kunokubakho into engaphaya kwendalo kulo mxube, ngakumbi nembali yengqondo kanina.
NjengoNatalie Erika James ' oyidingayo, Awunguye uMama wam Ukulwa impilo yengqondo noxanduva noxanduva phakathi komzali nomntwana. UDolan ubhengeza oku ngononophelo kunye novelwano olukhulu kuChar omncinci, oziva elilolo kwaye eyedwa nangona kukho inkxaso kumalume nakuninakhulu kunye neenzame ezivela kutitshala wakhe esikolweni.
Ukusuka kumanqaku e-melancholic ukuya kwi-cinematography evulekileyo kodwa esondeleyo, Awunguye uMama wam Inetoni yomoya edanisayo ejikeleze intlekele, kodwa ingaze inikezele ngokupheleleyo. Ifilimu yeDolan inamandla omlilo weSamhain: iyaqhekeka kwaye iyatsha, ngesiphelo esitshayayo esidumisa umoya weHalloween.
Ndiyayithanda into elungileyo "yolutsha olusengozini", kwaye Awunguye uMama wam Inobuchule obugqwesileyo obugqwesileyo kunye nobunzima obusetyenzisiweyo belo trope. Ingumlingiswa oqhutywa kukwindla-yobudala beentsomi kunye nezoyikiso ezenziwe kakuhle ezixhomekeke ekusebenzeni, hayi kwiibhakethi zegazi.
Ukuba ujonga i-stellar doppelgänger ephindwe kabini, dibanisa nale Umngxunya Emhlabeni. Awusoze ujonge amalungu osapho lwakho ngendlela efanayo kwakhona.
Ngakumbi kwi-TIFF 2021, jonga eyethu uphononongo lukaRob Savage I-Dashcam